पछिल्ला तीन महिनामा नेपालमा ३ अर्बको तरकारी र ५ अर्बको चामल आयात
पुनःनिर्माणका लागि सबैको साझा मत आवश्यकः मन्त्री अधिकारी
सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक
दातृ निकायले विकासमा सघाउनुस्ः परराष्ट्रमन्त्री
प्रतिमा आश्यचर्यजनक खेलाडीः उड्स
रुकुम काँग्रेसले गठन गर्‍यो छाया सरकार
आमाबुवा नभएकी घतानीको अभिभावक बने ट्रेड युनियन अध्यक्ष दाहाल
विश्वप्रकाशका नजरमा कांग्रेस ‘पराजयका ६ कारण’
आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण
राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको अवलोकन
यातायात व्यवसायीको धम्कीले सरकार विचलित हुँदैनः मन्त्री यादव
किन बढ्दैछ कृषि वस्तुको आयात ?
नयाँ पत्रिका | मङि्सर १८, २०७४
पछिल्लो समय नेपालमा कृषि वस्तुको आयात बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा नेपालमा ३ अर्बको तरकारी र ५ अर्बको चामल आयात भएको छ । खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूललगायत कृषिवस्तुको आयात उच्चदरमा बढ्दा नेपालको व्यापार घाटा झनै चुलिँदै गएको छ । आखिर किन बढिरहेको छ, कृषि वस्तुको आयात ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप महर्जनले कृषि वस्तुको आयात बढ्नुको कारण यसरी औँल्याए :
प्राथमिकताअनुसार काम भएन
पछिल्लो समय नेपालमा कृषि वस्तुको आयात अत्यधिक बढिरहेको छ । यसको सीधा कारण भनेको नेपालमा उत्पादन नहुनु, तर खपत बढ्नु हो । आयात किन बढ्यो भनेर विश्लेषण गर्दा उत्पादन किन बढेन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि वस्तुको आयात वृद्धिदर उच्च हुनु भनेको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभएर हो । नेपालले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, प्राथमिकतामा राखेअनुसार काम नहुँदा उपलब्धि हात लागेन । मुलुकमा आवधिक विकास योजना सुरु भएको २०१३ देखि नै कृषिले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । तर, अहिले २०७४ सम्म आइपुग्दा पनि यस क्षेत्रको प्रगति भने निराशाजनक छ । कुनै समय धान चामलको निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल अहिले आयातमा निर्भर भइरहेको छ । पहिलो आवधिक योजनादेखि १४औँ योजनासम्म आइपुग्दा पनि कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पायो, तर त्यो प्राथमिकता कार्यान्वयनको चरणमा आउन सकेन । योजनाअनुसार काम नहुँदा उत्पादन बढेन, तर खपत बढिरह्यो । यसले गर्दा परनिर्भरता झन्झन् बढ्दै गएको छ ।
नीति कार्यान्वयन फितलो
प्राथमिकतामा परेकै कारण कृषि क्षेत्रका लागि नीति पनि राम्रा बने । विडम्बना नीतिको सफल कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । कृषि प्रवद्र्धनका लागि थुप्रै नीतिनियम बनेका छन् । खासगरी पछिल्ला डेढ दशकमा धेरै राम्रा नीति आए । तर, तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसलाई सरकारी कर्मचारी पनि स्विकार्छन् । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ धेरै राम्रो छ । त्यसमा कृषि व्यवसायमा सुविधा, सहुलियत, करार खेती, सरकारी जमिनमा खेती गर्ने, भूमि व्यवस्थापनलगायत थुप्रै सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ । तर, एक दशक बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो छ । बजेट तर्जुमा गर्दा ल्याइने आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुँदैन । कृषिसँगै जोडिने भू–उपयोग नीति आयो, तर कार्यान्वयन छैन । सहरी क्षेत्रको जमिनलाई कित्ताकाट गर्न नपाइने, भूखण्डीकरण रोक्ने भनियो तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन । यसरी नीति बन्ने, तर त्यसअनुसार कानुन नबन्ने वा भएका कानुन संशोधन नहुने परिपाटीले पनि कृषि क्षेत्रले अपेक्षित विकास हासिल गर्न नसकेको हो । जसका कारण आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । मुलुकका कानुन आपसमा बाझिनेखालका छन् । एउटाले सुविधा दिन्छ, अर्कोले रोक्छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई मात्रै होइन, सरकारी कर्मचारीलाई पनि समस्यामा पारेको छ । यसर्थ, कानुन पनि आपसमा नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र आयात विस्थापनका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय अत्यावश्यक छ । तर, आवश्यकतअनुसार मन्त्रालयबीच तथा विभागहरूबीच समन्वय हुन सकेको देखिँदैन । अब झन् प्रादेशिक संंरचनामा गएपछि के हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ । कृषिसँग सम्बन्धित नीतिले आयकर छुटको सुविधा दिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालय र त्यससँग सम्बन्धित निकायले छुट दिन आनाकानी गर्छन् । सहुलियत दरमा ऋण दिने भनिएको छ, तर त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी कदम चालेको जस्तो देखिँदैन । सहुलियत ऋणका लागि किसानको उमेर ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रका लागि मात्रै पाइने व्यवस्था छ । अनि कसरी ऋण लिनु ? कसरी लगानी गर्नु ? कृषि विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयका विभागबीच समन्वय आवश्यक छ । एक–अर्काका सिफारिस र निर्णयलाई स्विकार्न सक्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई सुनिएन
नेपालको निजी क्षेत्रले व्यावसायिक कृषिका लागि, आयात विस्थापन तथा निर्यात वृद्धिका लागि सरकारलाई सधैँ सुझाब दिने गर्छ । तर, सुझाब कार्यान्वयन कमजोर छ । निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिमा प्रतिनिधित्वसमेत गरेको छ । यस्ता समितिमा पनि समस्या र समाधानका उपाय उठाउँछौँ, तर त्यसको सुनुवाइ कम हुन्छ । कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट बनाउने वेलादेखि अन्य वेलामा समेत सुझाब दिन्छौँ । तर, त्यसको कार्यान्वयन कम हुन्छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो उत्पादन बढ्न सकेको छैन । पछिल्ला समय भने सुझाब वा गुनासो सुन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । आजभोलि ७५ प्रतिशतसम्म सुझाब सम्बोधन हुन थालेको छ । यस्तै सकारात्मक पक्ष बलियो हुँदै गए यस क्षेत्रको विकास हुन्छ र हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ ।
गैरकानुनी स्थानीय कर
प्रदीप महर्जन, कार्यकारी प्रमुख, कृषि उद्योग केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अझै पनि थुप्रै क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा स्थानीय कर उठाइने गरेको छ । स्थानीय निकायले कर उठाउन स्वतन्त्रता पाएकोजस्तो देखिन्छ । खासगरी नगरपालिका, जिविसलगायतले ठेकेदार लगाएर विभिन्नखाले कर उठाउने गरेका छन् अझै । बर्दियामा उत्पादित सामान बाँके वा नेपालगन्ज ल्याउँदा ४–५ ठाउमा चेकपोष्ट राखेर कर उठाइन्छ । प्रतिकिलो १० पैसादेखि ५० रुपैयाँसम्म कर उठाउँछन् । जुम्लामा जडीबुटी प्रशोधन कारखना राख्ने भनियो र खुल्यो पनि । त्यसले जटामसीको तेल उत्पादन ग¥यो । तर, जिविसले प्रतिकिलो ३ हजार रुपैयाँ कर लगाइदियो । हामीले सर्वोच्चमा रिट दायर ग¥यौँ र हाम्रै पक्षमा फैसला पनि भयो । तर, ठेकेदारले कर उठाउन छाडेनन् । करका दर राष्ट्रिय नीतिअनुसार हुनुपर्नेमा कार्यान्वयन भएन । यसले हाम्रो उत्पादन लागत बढाएको छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाएको छ ।
कृषिमा अनुदान पुगेन
भारतको कृषि उत्पादनसँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा हाम्रो बजारमा भारतीय उत्पादन बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको अनुदान र सुविधा पनि हो । हाम्रो र भारतको कृषि विकासमा सरकारले दिने अनुदान र प्राथमिकतमा धेरै फरक छ । भारतमा अत्यधिक अनुदान दिएको छ । नेपाल सरकारले दिन सकेको छैन । नेपालले कृषि अनुदान दिने भनेर नीतिनियममा लेख्ने तर नदिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । भारतमा साना ठूला सबैखाले कृषि व्यवसायमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान रहेको छ । तर, नेपालमा साना कृषि व्यवसायले मात्रै अनुदान पाउँछन् । भारतमा कर छुट छ । नेपालमा कर छुट छ तर त्यो झन्झटिलो छ । कृषिमा भ्याट छुट छ, तर प्रशोधनमा लगाइदिन्छन् । हाम्रोमा छुटको व्याख्यामा पनि धेरै सर्त राखिने गरेको छ । जब कृषिमा अनुदान पाइँदैन तब उत्पादन लागत बढी हुन्छ । आम्दानी नहुने भएपछि नेपाली कृषक पनि पलायन हुन्छन् ।
बिउ र मल अभाव
नेपालको कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्यामा बिउ र मल अभाव पनि हो । अहिलेसम्म पनि किसानले समयमा मल र बिउ पाउन सकेका छैनन् । यहाँ मल र बिउको मूल्य पनि भारतमा भन्दा निकै महँगो छ । अहिले हाइब्रिड बिउको चलन आएको छ । तर, यस्ता बिउ पञ्जीकरण भएको मात्रै बिक्री वितरण हुन्छ । तर, नयाँ आएको बिउ पञ्जीकरण गर्न २ वर्ष लाग्छ । २ वर्षसम्म फेरि नयाँ बिउ आइसक्छ । अनि हामी पञ्जीकरण मात्रै गर्ने ? उत्तर प्रदेश र बिहारमा पञ्जीकरण भएको बिउलाई यहाँ ल्याउन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पञ्जीकरण पनि गर्दै गर्ने र बिक्री तथा उत्पादन पनि गर्दै गर्दा राम्रो । यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।
जनशक्ति र कृषककै अभाव
अहिले कृषि क्षेत्रमा एकातर्फ जनशक्तिको अभाव भने अर्कातर्फ कृषक नै पलायन हुने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । बजार पहुँच भएका काठमाडौं र नुवाकोटमै पनि प्रशस्त खेतबारी बाँझो रहेको देखिन्छ । नेपालीमा अरबमा ऊँट चराउन तयार हुने, मलेसियामा गह्रौँ काम गर्न तयार हुने, तर आफ्नै खेतबारीमा पसिना चुहाउन लजाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको सरकारले आकर्षक कार्यक्रम नल्याएर पनि हो । विनाधितो ऋण, निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था र थप सहुलियत भएमा व्यावसायिक कृषि बढ्न सक्थ्यो ।
सिँचाइलगायत पूर्वाधार अभाव
कृषि क्षेत्रको अर्को मुख्य समस्या भनेको सिँचाइ पनि हो । अझैसम्म पनि मुलुकको करिब ३० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ७० प्रतिशत क्षेत्रले अकासेपानीमा भर पर्नुपरेको छ । माइक्रो सिँचाइको विकास पनि हुन सकेको छैन । सिँचाइ नभएका कारण समयमा उत्पादन नहुनेलगायत समस्या छन् । चिस्यान केन्द्र, भण्डारण केन्द्र, बजारका लागि सडकलगायत पूर्वाधार पनि अभाव छ ।
नेपाल–भारतबीच १ हजार ५० किलोमिटर खुला सीमा छ । ५–६ ठाउँमा मुख्य चेकपोस्ट छन्, तर खुलासीमा भएकै कारण जथाभावी आयात हुन्छ । भारतमा प्रतिबन्धित गुणस्तरहीन वस्तु नेपालमा आयात भइरहेको छ । हाम्रोमा क्वारेन्टाइन ल्याब कम छन् । भएका पनि सञ्चालनमा आउँदैनन् । जहाँबाट जे पनि आयात भइरहेको छ । भारतबाट सहजै आयात हुन्छ, तर हाम्रो निर्यातमा भने धेरै अवरोध खडा गरिन्छ । यसर्थ, निर्यात सहजीकरण र आयात नियन्त्रणमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
चितवनलाई विकासको ‘हव’ बनाउने प्रचण्डको उद्घोष
‘याे आर्थिक वर्षभित्र धरहराको शिलान्याससम्म हुन्छ’
सत्ताभन्दा जनता बलियो हुने गरी काम गर्छौँ : प्रधानमन्त्री
‘तीन वर्ष बित्दा पनि बनेनन् घर, कसरी पराैँ सरकारको भर’
धरहराबाट खसेकी रमिलाको अठोट ‘अब जीवनमा केही गर्नैपर्छ’
बंगलादेशबाट छुटेका बसलाई झापामा भव्य स्वागत [फोटोफिचर]
यस्तो छ भूकम्पमा क्षतिग्रस्त सम्पदाकाे अवस्था (फोटोफिचर)
अन्नपूर्ण बेसक्याम्प जाने हेलिकोप्टर र पर्यटकले लिँदैनन् प्रवेशाज्ञा